Usizo Lomgwaqo e-12 Bonnycastle St, Toronto | I-Sparky Express®
Usizo Lwaseceleni Komgwaqo e-12 Bonnycastle St, eToronto
June 22, 2022 I-Sparky Express
Izinkonzo Zosizo Lomgwaqo e-12 Bonnycastle St, eToronto. Shayela (647)-819-0490
Uma imoto yakho ipakwe e-12 Bonnycastle St, e-Toronto egalaji lokupaka elingaphansi komhlaba, uzodinga umhlinzeki wosizo oseceleni komgwaqo ongakusiza ezindaweni zokupaka ezingaphansi komhlaba e-Toronto.
Izinsiza zosizo eziseceleni komgwaqo zitholakala egalaji lokupaka elingaphansi komhlaba e-12 Bonnycastle St, Toronto:
Insizakalo yokuthuthukisa ibhethri (kucelwe abashayeli abavaleleke egalaji lokupaka elingaphansi komhlaba ngenxa yebhethri elifile).
Isevisi yokuvala imoto (kucelwe abashayeli abakhiye izikhiye zemoto ngaphakathi kwemoto, futhi abakwazi ukuvula izicabha zemoto).
Isevisi yesondo eliphansi (icelwe abashayeli abaphantshile isondo futhi abadinga usizo lokufaka isondo eliyisipele, noma ukulungisa isondo eliphantshile uma lokhu kungenzeka).
Ukushintsha kwamasondo esizini kurimu. Le sevisi isidume kakhulu eminyakeni yamuva, ngokuyisisekelo sishintsha amathayi akho enkathi ethile egalaji lokupaka, uma wonke e-on-rim.
Ungalucela Kanjani Usizo Lwaseceleni Komgwaqo e-12 Bonnycastle St, Toronto, KU-M5A 0C9
Kunezinto ezimbalwa okufanele uzazi mayelana nokuthola usizo lomgwaqo kule ndawo:
Ukuze uthole isevisi yosizo lomgwaqo ngokushesha, sicela ushayele ku-(647)-819-0490 futhi usazise uma udinga isevisi ngokushesha, noma uma ufisa ukwenza i-aphoyintimenti yesikhathi sakamuva noma idethi. Ungakwazi futhi ukubhuka yethu izinsizakalo zosizo lomgwaqo inthanethi.
Sizokushayela imizuzu eyi-10 ngaphambi kokufika kwethu, ukuze sikunikeze isikhathi esanele sokuphuma futhi uhlangane nemoto yethu yesevisi. Sicela uqiniseke ukuthi uletha okhiye bemoto yakho kanye nesivuli somnyango wegalaji (fob, remote, njll), njengoba sidinga ukushayela imoto yakho egalaji lokupaka elingaphansi komhlaba ukuze sibe nokufinyelela kuzo zonke izinto ezisetshenziswa emotweni yethu, ezidingekayo ukuze sisevise imoto yakho. . Ngaphandle kwalokho, ungenza amalungiselelo ngokuvikeleka ukuze usivumele sishayele singene.
Futhi, qiniseka ukuthi uza nefomu lakho lokukhokha olifunayo (ukheshi, amakhadi edebhithi, noma esikweletu, i-Apple Pay noma i-Google Pay). Ngemva kokuba imoto isilungisiwe, kuzodingeka sishayele ngaphandle futhi ukuze sicubungule inkokhelo yakho, njengoba emagalaji amaningi okupaka angaphansi komhlaba ezakhiweni ze-condo eziseDowntown Toronto, awekho isignali yeselula noma i-inthanethi.
I-Sparky Express ingumhlinzeki wendawo wosizo oseceleni komgwaqo e-Toronto, futhi sisebenza ngokukhethekile ekusizeni amakhasimende avaleleke ngenxa yebhethri elifile, ukukhiya ngaphandle noma isondo eliphantshile emagarajini okupaka angaphansi komhlaba ezakhiweni ze-condo.